Hiikkaa Google Afaan Oromoo irratti haa hirmaannuu | OROMIASAMSUNG
By abdulwasi oumer	 On Oct 7, 2020 91,722 100
4. Setting > Languages > Gadi bu’aa Oromo filadhaa
5. itti aansun Suuraa asii gadii qalbeeffadhaa
Suuraan kun Himoota haaraya yogguu Afaan Oromootti hiiktu agarsiisa
Tatoo says 2 years ago
Abdurheman ogeto says 2 years ago
Jajjaabadhaa waan garii hajaachaattii jirtuu
Abuu.bilaal says 2 years ago
Mohammed sham says 2 years ago
Wow baay’ee natti tola afaan oromoo Google seenuu isatti hayyoonni keenya galatooma galannii keessan bilisummaa oromoo fi oromiyaa haa ta’uu
Abdulhakim says 2 years ago
Abdulkarim says 2 years ago
Hojii boonsaa Afaan koo Guddisuufi
Hjjatamaa jirutti nan Gammada Namoota Qooda kana fudhatanii Bu’aa bahii Hedduu Keessaatti sadarka kanaan gahanis Hedduu Galatoofadha.
Anis Dirqama Oromummaa koo nan Baha.
Tole, Atiis Qooda kee bahachuuf seenaan si yaadataa Galatoomi.
Abdii Yusuf says 2 years ago
Waan baay,ee gaaridha hojjacha jirtan nutis waan dandeenyu hundaan isiin bira jirra jabaadha
Oromoon galaana says 2 years ago
Darara says 2 years ago
Adero wani garidha jabadha
Obse says 2 years ago
Hojii boonsaa hojjataa jirtu Itti fufa. Please namoonni hundinuu irratti haa hirmaannu. Galatooma.
Jemal Bekele says 2 years ago
Baay’ee waan gaarii dha.
Gemeda says 2 years ago
Hojii gaarii hojjetaa jirtan kanatti nu haffeeru keessanif guddaa galatooma. Kuno har’aa tokko jedhe hojii koo eegaleera.
Abdisa says 2 years ago
Baay’ee nama gammachisa.Jabadha!
Beyan Ame says 2 years ago
Abdiimahamed says 2 years ago
Afan oromo AfanTeknolojiitii Hagudifnu.
kalid Abdu says 2 years ago
Fuhad Zinaabu says 2 years ago
Bayyee namati tola harka wol qabannee afan oromo ha guddiisnu
Nura says 2 years ago
Hojii bareedaafi seena-qabeessa jalqabdan kana jabeessaa itti-deemaa!Nutis waan dandeenyeen isin faana jirra.
Dandi Waga says 2 years ago
jabaadha seenaa hojjecha jirtu waliin hojjenna!
Khalid Hussein says 2 years ago
I’m proud of you my people Oromo.
Itti jabaadha ammas hala bareeda irra jirtan.
Firomsaa says 2 years ago
Hojii baayyee gaariidha jabadha bekton kenyaa fi Haayoni kenyaa hundii irraati hiramadha wan Akkan nama boonsu hojata jirtani nuf jiradha namota hedduu nuf hirmachisaa
Abdella Hamed says 2 years ago
Kanna Hojjin dansaan
Abdulbarii Abbaa jebel says 2 years ago
Afaan koo Afaan oromoo
Jabadha baay’ee namati tolla
Toora jedhameen deemus, ‘English to Afaan Oromoo’ kan jedhu argachuu hindandeenye.
Tafese says 2 years ago
hundii dirqama isaa bahuu qaba. Jabaadha.
Muhiddiin Amaan says 2 years ago
Jabaadha jalqabbii gaariidha
Geremew Dula Temesgen says 2 years ago
Damee Sibuu Siree irraa Jenereetarri diduurraan kan ka’e yoo Ibsaan bade tajaajilamuu hin dandeenye ! Nuuf sirreessaa !!
Abera Bunguli says 2 years ago
Galatooma hayyootni keenya hundinu. Osoo afaan keenya baay’ina ummataa dubbatuun ilaallee addunyarraa sadarkaa 22ffaa irratti argama. Nutti garuu afaan keenya xiqqeessine afaan mandara fi tuffatama fakkeessine. Yaa dhaloota Oromoo afaan kee guddifachuu kan qabu si’i malee, alagaan sin guddisu.
Yoseef Tarreessaa says 2 years ago
Jabaadhhaa.haayyota keenyaa wanta dandeenyun isin bukkee jirra.
kedir Dekebo says 2 years ago
Kun hojii baayyee nama boonsudha. Af Somali illeen osoo google irra jiru afaan keenya dhabamuu isaatti gaddaan ture. Amma eegaluu isaatti gammadaa hojiin kun akka galma gahuuf immoo gahee koo taphuuf qophiidha.
Zekarias says 2 years ago
Àmìñàà says 2 years ago
Waani bardaa jabadhaa
Mame luba says 2 years ago
Of tahuun keenya barbaachisaadha
Dagim Galata says 2 years ago
Daba Fikadu says 2 years ago
Haa jabaannu !
Dawit Gemechu says 2 years ago
Hujiin kun hujii Gaariidha Galatooma warreen yaadni kun hujiirra akka oolu gootaniif
Jennenus says 2 years ago
Waan baay’ee namatti toluu fi hedduu nama boonsuudha. Warri haala kana mijeessuuf qooda fudhattan hunduu galatoomaa.
Babi Bunte says 2 years ago
Anis gahee koo baheen jira isin hundumtuu hamma dandessaniin irratti hirmaannaa taasisaa isin fayyada waan ta’ef.
Galataa Mul'ataa says 2 years ago
Baay’een isinitti gammade galatoomaa seenaaf galaa ol kaawwattaniittu
Daraja Doshi says 2 years ago
Darartukedir says 2 years ago
Murata Hussein says 2 years ago
I can translate any English words into afan oromo
Girma Abera says 2 years ago
Itti haa fufu!
MansurAbdu says 2 years ago
Jabaadha hayyoota keenya warreen waan kana durummaan hojechaa jirtan galanni ani isiniif qabu dechaadha! Ummani oromoos xiqqaa guddaa oso hinjedhin afaan keenya guddisuuf waandandenyuun gahee nurraa egamu bahachuu qabna kan hiikutti dandeetti qabu hiikuu kan hiikuu hindandenye immoo share gochuun gahee keessan bahadhaa! Galatomaa!!
Ahimad Abduqqee says 2 years ago
Hojii gaariidha garuu yeroo dogongorri argamu akka sirreeffamu ykn edit godhamu osoo ta’eetii bareeda ture.
Abdata says 2 years ago
Hojii gaariidha isin bra jirraa jabaadhaa
Chalchisa Lenjisa Boke says 2 years ago
Hojiin kuni hojii Boonsaadha itti fufuutu irra jiraata namoonni Afaan Oromoo dubbatan hundi irratti hirmaachuu qabu.
Lataa says 2 years ago
Hojii gaariidha, itti fufa qabaannaan. Gumiin guddicha afaan oromo warri je’ee horii guuraa ture eessa kute? Akka akkas hin taaneefiin kaase.
Hiikkaa Google Afaan Oromoo Irratti Haa Hirmaannuu – AMBO TV 2 years ago
[…] Hiikkaa Google Afaan Oromoo irratti haa hirmaannuu […]
Malkaa says 2 years ago
Waan dansa dha.waanta xiyyeeffaanna guddaa gafaatudha.
Indalo Namomsa says 2 years ago
Kana booda namni oromoo tuffatu haa qaana’u jabaadhaa lammiikoo utuu moortuun moortuu hortuun horti jedha oromoon
Zaki says 2 years ago
This language is for 70milon people have been using so it’s important to be Google translate
Merob says 2 years ago
Woow ani bayyee waanaan gammadde jiruuf amanuun natii hulfaata, ji’ota darbaan afaan kenya translate ta’uu dhabuu isa bayyee gaaddeen ture afaanonii bayyeen jijiramaanirru kaan amma kenya bayyinna uummata hin qabnee iyyu, ani amma jiraatuu biyya Americati waagga bayye muraasa ta’een kessa jiraacha jira mana barumsaa eegaleen afaan Englifa barachuu egalee gaafa barsiisonni class tti waan hojjennu nuuf keenaan irriyyonni koo guya guyadhaan dadafaani barressanii deebisu essa fiddu jedhee gafaadhee jenaan maali atii afaan kee Google gotee hin bareessittu nu’ii akkas goona naan jedhaan hundii isaanii iyyu namota akka kooti waan ta’aniif kaan kenyaa immo hin hiikaamnee waan ta’eef rakkodha, kanaaf bayye nama gammachisaa lammi koo ni dhaqabna dhalooni nu dubaan hdhufaan akka keenya hin ta’aan matuma, waaqayyo nu gargaraa Eebbifama!
Yaada keessaniif guddaa Galatoomaa. Duulli taasifamaa jiru kun dhiyootti milkaa’ee akka isin gammachiisu abdii qabna.
Yerosan says 1 year ago
Yaa waaqayyo Numilkoomsi!
Milku Gemeda says 1 year ago
woooooow waan akkam nama gammachiisu dhugaa,worri kana gootan galata guddaa qabdu dhaloota biraa.Horaa Bulaa Deebanaa
Hayyee, isiniis Galata qabdu
Rabbirraa Toleeraa says 1 year ago
Haalli kuni baay’ee gaariidha. Guddina afaan keenyaaf shoora olaanaa qaba.
Tadele Gemeda says 1 year ago
Guddina Afaan Oromoo keessatti hundi keenya gahee keenya haa baanu!
Magarsa says 1 year ago
Jabaadha yaa ijoollee oromoo afaan keeyna afaan keeyna gudachuu qabaa
Mesay says 1 year ago
Chala Asfawu says 1 year ago
Hojii namatti toluudha jabaadhaa ijoollee keenyaa!
Dhaloota Qubee jedhamuun keenyas kanumaafi
Gemechu says 1 year ago
Waan jajjabeeffamuu qabu.
Yeroonamma says 1 year ago
Baayee gaariidha akkasitti itti fufaa!!
Dr. Bayissa Chala says 1 year ago
Akka baay’ina keenyaaf kun halkan tokkotti waan raawwatu ture!
Ammas yeroo qabna haa jabaannu!
Mohammed sham says 1 year ago
Loomiin firiin 50 nama 50f ba’aa guddaa garuu nama 50 fuunfata jedhamaamiti ree ⁉️ kanaafu wal-irraa hin hafnu irratti hirmaadhaa isiniis gamaa keessaniin hayyoonni keenya gulaaluu itti fufaa
Feti says 1 year ago
Brilliant jabaadha hojii baredadha
Murtessa K. Duressa says 1 year ago
Waliin taanee Afaaniifi Aadaa keenya haa guddifnu yaada gaariidha. Labata haaraa beekumsa qulqullaa’aafi Aadaa cuunqoo has dhaalchifnu
Dinkolas says 1 year ago
Nuuf jiraadhaa lammiiwwan koo hojii boonsaa hojjattanii!
Ture Urago says 1 year ago
Nuboonsitan ittiin boonaa
Amin Abdurahman says 1 year ago
Uso ahmed says 1 year ago
Nugusaa Abbaajoobir says 1 year ago
Afaan sirni gadaa addunyaaf bu’ura ta’e ittin bocamee. Ganaa darbee deemaa nuti garuu gahee nurraa eegamu ba’achuu qabna.
Jalene Yadeta says 1 year ago
Jabaadha haa jabaannu! Afaan keenya guddiisan.
Fahmi says 1 year ago
Aliyi says 1 year ago
Afandii says 1 year ago
Namoonni waan kanarratti hirmaachaa jirtan Qubee afaan Oromoo guutee nama barreessuu danda’u ta’uu qaba. Yoo akkas hin taane hiikni isaa jijjiiramuu waan danda’uuf of-eeggannoodhaan qubee guuttanii yoo barreessitan gaariidha.
Lemma dejene says 1 year ago
Hirmanna Kenya barbada
Abdulkedir Ebrahim says 1 year ago
Afaan keenya Afaan Google ta’uun Afaan Oromo hagam akka guddataa jiru nutti muldhisa. Warri akka kun ta’uuf dhamaatii guddaa goota galata uummata keessanirraa qabdu.
Beydarus baale says 1 year ago
Oromoo koo qomoo koo jajabadha Afaan kenyaa fi Addaafi dudhaa kenyaa haa guddifnu
Gaaddisa Tolasa kishee says 1 year ago
Hojii dhalootaa dalagaa jirtu ammallee rabbi sin waliin Haa tahu jajjabaadhaa. Wanta narraa eegamu hin hojjanne Ani. Walitti deebina.
Dereje says 1 year ago
Baayyee Baayyee Gaariidha
Ĵemal ýě ørø liĵ negn says 1 year ago
Bayyee bayye namati tola Galatomaa
Itti muddaa jira
Waan baay’ee barbaachisuu fi guddina Afaan Oromoo tiif gumaacha guddaa qabu hojjettaan, fayyaa ta’aa jabaadhaa.
Seyoum says 1 year ago
Abdellah Hasen says 1 year ago
Baay’ee Gaarii Hojii boonsa fi seenaa qabeessa Jabaadha waan dandeenyun walin jirra.
Sanyii Biraanuu says 1 year ago
Waan baay’ee namatti toluudha jabaadhaa itti fufaa! Garuu, haala qubeeffama isaa irratti gaarii goonee gulaaluu qabna!
Amanu says 11 months ago
Jabaadha hojii gaariidha
Nuuyis ammaa dandeenye siin gargaara
Abay says 10 months ago
Dhaamsa fi Gorsa beektota keenya biyya hambaa jirtanuufi afaan Ingiliffaa sirriitti hubattaniif. Yeroo keessan aarsaa gootanii xiyyeeffannaan osoo irratti hirmaattanii. Sabboonummaan kana caaluu goonkumaa jira jedhee hin yaadu. Dhuguma saba bal’aa kanaaf yaaddu taanan xiyyeeffannaa itti kennaa siyaasni ni darba yeroo keessan hedduu irratti hin balleessinaatii. Nutis warri biyya keessa jirru konneekshinii fi interneeta hin jirre kana waliin wal’aansoo walqabaa hanga dandeenyu hiikutti jirra. Ulfaadhaa!
Chala Jafer says 2 months ago
Baga bu’aa dadhabbii keessanii argitan!!
Afaan Oromoo google tti waan dabaltaniif ulfaadhaa!!